bhimphoto: 'उनका आँखाले हेरिरहोस् संसार'
गत आइतबार विराटनगर आँखा अस्पतालका बिन्देश्वर मेहताको फोनले एउटा घरमा पुग्न बाध्य पार्‍यो । कारण, मैले नै भनेको थिए 'आँखाको नानी कसरी झिक्छन् हेर्न बोलाउनु होला ।' मलाइ हेर्ने रहर थियो । चिकित्सकहरुसँगको कुराकानीपछि थाहा भएको थियो - नेत्रदानका इच्छापत्र भर्ने धेरै भएपनि अपेक्षित रुपमा आँखा संकलन गर्न सकिदैन । कारण- इच्छापत्र कानूनी कागजात नभइ सहमतिको सामान्य दस्तावेज मात्र हो । इच्छापत्र भरेका मान्छेको मृत्यु भएपछि परिवारले खबर गरेमात्रै अस्पतालको टोली त्यो घरमा पुग्छ । धेरै घटना यस्ता हुन्छन् जसमा अस्पतालले चाहेर पनि आँखादानको सहमति गर्नेबाट दान पाउँदैन । आफन्त शोकमा हुन्छन् । त्यस्ता बेला मरेका मान्छेको झिक्छु भन्नु धृष्टतामा पर्छ ।
तर, आइतबार मेहताजीले भनेको घरमा जसको आँखाका नानी झिकिएको थियो, उनको इच्छापत्र थिएन । परिवारको इच्छाले दान सम्भव गरायो । नेत्र चिकित्सकहरुका भनाइमा मरेर जाने मान्छेले बाँचेका तर, ज्योतिविहीन मान्छेका जीवनमा उज्यालो दिएर गुन लगाउन सक्छन् । जे होस् पुगेका ठाउपछि अर्को दिन अस्पतालमा प्रत्यरोपणपछि सद्दे भएकाहरुलाई भेट्न पाइयो । समाचार लेखियो, छापियो पनि । छापिएको केही सम्पादित रह्यो । ब्लगमा पुरा कुरा यस्तो छ-
'छाडेर गइहालिन् । हामीलाई लाग्यो उनका आँखाले अरुलाई दृष्टि मिल्छ भने किन नदिउँ,' ७९ वर्षीय इन्द्रचन्द सेठियाले यसोभन्दा उनकै आँखा रसाए । विराटनगर-९ स्थित सेठिया निवासमा समवेदना व्यक्त गर्न आउनेहरु कोही रुदै र कोही विश्मय मान्दै हेदैछन् । कमलादेवीका आँखाका नानी केहीबेरमै आँखा अस्पतालका कोर्निया (नानी) संकलकले झिके । विदा माग्न तयार भएपछि प्राविधिक टोलीलाई छोरा जितेन्द्रले भने 'हामीले इच्छापत्र भरेका थिएनौ । तर, एक फोनमै आइदिनुभयो, धन्यवाद ।'
न्युन रक्तचाप र मधुमेहपीडित ७३ वर्षकी कमलादेवीको गत आइतवार निवासमै निधन भएको थियो । सेठिया परिवारले आफन्त भेला हुन सुरुहुँदै विराटनगर आँखा अस्पताललाई खबर गरेका थिए । अब उनका आँखाका नानी कुनै दुइ दृष्टिविहीनका लागि काम लाग्नेछन् । प्राविधिक शिवचरण मेहताका अनुसार सेठिया परिवारको जस्तो आग्रह निकै थोरै हुने घटनामध्येका हुन् । 'यस्तो रेयर केस हो', उनले भने,' नेत्रदानको इच्छापत्र भरेकैको नानी लिन हामीलाई धेरैपल्ट गाह्रो हुन्छ ।'आफन्त शोकमा हुन्छन् । इच्छापत्रका कुरा बुझाउन सकिने अवस्था हुँदैन । 'कतिपल्ट पत्रिकामा समवेदना छापिएको हेरेपछि थाहा हुन्छ, त्यो मान्छेले आँखादानका लागि इच्छापत्र भरेर पठाएको थियो' उनले सुनाए, 'तर, बेला बितिसकेको हुन्छ ।'
विराटनगर र आसपास हालसम्म ३ हजार २ सय ५५ जनाले नेत्रदानको इच्छापत्र भरेका छन् । तर, चार वर्षयता नेत्रदान गर्नेको संख्या ७१ जना मात्रै छ । 'प्यारो मान्छे खरानी भएर, माटोमा मिलेर बिलाउनुअघि उसको आँखा दान गरौ, त्यसले अर्कोले ज्योति पाउँछ भन्ने थोरै छन्' उनले अनुभव सुनाए, 'नेत्रदानको इच्छापत्र आदर्श हो, यसलाई व्यवहारमा उतार्ने थोरैमात्रै परिवार छन् ।' अझ सेठियाजस्ता परिवार त छैनन् भनेपनि हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।
विराटनगर आँखा अस्पतालका प्रमुख डा. संजय सिंहका अनुसार मुलुकमा वर्षेनी आठ हजार जनाका लागि आँखाका नानीको माग छ । तर, उपलब्धता तीन सयबाट बढेको छैन । मागका अनुपातमा उपलब्धता नबढेपछि प्र्रत्यारोपण गर्न आउनेलाई अस्पतालले एउटामात्रै नानी राखिदिने गरेको छ । नहुनुभन्दा एउटै मात्रैले देखेपनि दृष्टि फिर्छ भन्ने मान्यताले यस्तो गरिएको हो । 'आँखादानको चलन बढ्ने हो भने मागभन्दा धेरै कोर्निया कलेक्सन हुन्छ । नानी नपाएर संसार देख्न बञ्चितको संख्या घटिहाल्छ', उनी भन्छन् 'हामीभन्दा आँखादानको परम्परा एकदमै न्युन बंगलादेशमा रहेछ । अहिले त्यहाबाट दृष्टि पाउन मान्छे यहाँ आइरहेका छन् ।'
सोमबारमात्रै ओखलढुंगाको वर्नालु-२ की ७३ वर्षीया चन्द्रकुमारी दाहाल, भारतको भागलपुरका ५६ वर्षीय दीपनारायण मण्डल, असमका अन्सर अली र बंगलादेशको चपैनाबावगञ्जकी ५० वर्षीया हबिबाको संसार फेरि उज्यालो भयो । अरुका आँखादानले यिनीहरुलाई दृष्टि मिलेको हो । जो कसैका नानी तुरुन्त झिकेर अन्यलाई प्रत्यारोपण हुँदैन । यसका प्रक्रियाबारे डा. सिंह भन्छन् 'कोर्निया हामी तीलगंगाको ल्याबलाई पठाउँछौ । उसले परीक्षणपछि हामीलाई फिर्ता पठाउँछ । त्यसपछि क्यूमा रहेकाहरुलाई प्रत्यारोपण गरिन्छ ।'